IINGCAMANGO EZI-101 ZETATTOO EZIBALASELEYO KUBANTU (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos Iingcamango ezi-101 zeTattoo eziBalaseleyo kuMadoda
Ukuba ukhangela itattoo entsha, uyayithanda ingqokelela yethu yezona mvo zibalaseleyo ze tattoo kumadoda. Ezi zoyilo zipholileyo zenza ezona tattoos zibalaseleyo esizibonileyo. Kodwa ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo zeetattoos zokuyila nezizodwa, kunokuba nzima ukukhetha umsebenzi wobugcisa ogqibeleleyo. Ukusuka kumava ethu, ezona tattoos zibalaseleyo emadodeni zivela kwizimvo ezingaphelelwa lixesha, ezakudala.
Umzekelo, ukufumana intsingiselo usapho , caphula, igama, umnqamlezo uhlanga, Ingonyama , ukakayi , phoenix , okanye Ingcuka I tattoo inokuba sisigqibo esikhulu. Kwaye abafana banokhetho lokukhetha naliphi na ilungu lomzimba oyindoda ukuze babonwe, kubandakanya nabo ingalo , isifuba , igxalaba, umva , umlenze , isihlahla okanye isandla . Ekugqibeleni, ukhetho lokufumana i-inki lunokuba lula, kodwa ukufumana uyilo lwe-badass kunye nokufumanisa ukuba ungayifumana phi kunokufuna ukukhuthazwa.
Ingaba ufumana tattoo yakho yokuqala okanye ufuna ukongeza kwimidwebo esele ikhona, jonga esi sikhokelo kuyilo oluphezulu lwe tattoo kumadoda!
1Izimvo zeTatto yamadoda
1.3I tattoo yenkolo
2.10I tattoo yesisu
Izimvo zeTatto yamadoda
Iingcamango ze tattoo ezimangalisayo zinokuhluka ukusuka kumancinci kwaye kulula ukuyila kunye nentsingiselo. Uyilo lunokuba mnyama kwaye lube mhlophe, konke kube mnyama, okanye yonke imibala yomnyama yempembelelo entle yamanzi. Xa kuziwa kuyilo lwe tattoo olungcono, amathuba anokuphela ngokwenene. Nazi iitatoo ezipholileyo kakhulu zokukukhuthaza.
Iitattoos ezincinci zilungile kubasebenzi abasebenzayo okanye kubafana abangafuni ukuba iitattoo zabo zibachaze. Elona candelo lilungileyo kukuba unokufumana umvambo omncinci naphina emzimbeni wakho.
Nokuba ukhetha uyilo oluncinci engalweni yakho, isandla, isihlahla, okanye isifuba, ungasoloko uwufihla umsebenzi wobugcisa xa ufuna. Ekugqibeleni, iitattoos ezincinci zenza ukuba ibeyokuqala kunye nokulula tattoo kumadoda.
Iitattoos ezilula zibubungqina bokuba uyilo akufuneki lube nzima okanye lube nzima ukuze luphole. Umbono olula unokubonelela ngentsingiselo ngakumbi kwaye uvumele ubuchule kunye nesitayile. Ngokubanzi, iiTattoos ezincinci nezilula ziye zathandwa kakhulu emadodeni.
I tattoo yenkolo
Iitattoo zonqulo ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezitayile. Ezinye zezona zimvo zithandwayo zetattoo zonqulo zibandakanya umnqamlezo, iivesi zebhayibhile ezinjengoJohn 3: 16, kunye namabinzana anjengoThixo kuphela onokuNdigweba.
Ngokwendalo, inkolo yobuKrestu ayisiyiyo yodwa enokuthi yenziwe ingafi kwi-inki; ezinye iitatto zinokumela izithixo zamaGrike, amaRoma, kunye nezaseNorse. Ezi tattoo zilungele abafana abafuna ukubonisa ukuzinikela kwabo ebomini.
I-Crucifix kunye nee-tatoos ezinqamlezileyo zezona zinto ziyintandokazi zamaKristu oya kuthi uzibone. Uphawu lukaThixo, uYesu, kunye nokholo lwakho tattoo yomnqamlezo ibonelela ngeendlela ezininzi zokukhetha isitayile.
Umqolo weenwele zendoda
Iimpawu ze-Quote ziyaqhubeka nokufumana ukurhawuzelelwa ngamadoda ngenxa yokukwazi kwabo ukumela ngokuchanekileyo ifilosofi yobomi okanye inkolelo. Xa ujonga izimvo zetattoo, izinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe kubandakanya intsingiselo, ubungakanani, indawo kunye nefonti- zonke zidlala indima ebalulekileyo ekugxininiseni umyalezo.
Kulungile ukukhumbula ukuba ukucaphula okude kuya kufuna indawo ethe kratya kunye nefonti okanye iscript esincinci kakhulu kunokuba nzima ukuba sifundwe.
Ngokufanelekileyo, isivakalisi esinye okanye ibinzana lelona lilungileyo, kwaye uninzi lwabafana lukhetha iikowuti ezinamandla kwiingoma okanye ababhali ababathandayo.
Ukuba ujonge uyilo olumele amandla, isibindi, kunye nosapho, the Ingonyama tattoo lukhetho oluhle kakhulu. Ingonyama iphakathi kwezona zinoburhalarhume emhlabeni, kwaye inokuba sisikhumbuzo sokomelela kwakho.
Iingcamango zetattoo yengonyama zinokuma zodwa okanye zingqongwe yiminye imifanekiso kwikholaji entle, eyenza ukuba ibe yindawo efanelekileyo yobugcisa umkhono , isifuba, okanye umva.
Itattoo yengcuka yenye yezona zimvo zilungileyo zetattoo yezilwanyana kubafana. Ngenxa yokuba ifuzisela usapho, ukomelela kunye nokunyaniseka, inokuphazamisa ubudlelwane bakho namalungu osapho kunye nabahlobo.
Abafana banokukhetha Ingcuka yoyilo yoyilo ezibonisa umzimba opheleleyo okanye intloko ukukhala enyangeni.
Iitattoos zokhakhayi zezona zikhulu kakhulu zeembono zeetattoo. Amagcisa anetalente ayibuyisele kwakhona Uyilo lwekrele kumawaka eendlela ezahlukeneyo nezizodwa. Ke ukuba ufuna umzobo omncinci wesandla sakho okanye isiphatho, okanye uguqulelo oluvuthayo lwe-3D emqolo, esifubeni okanye egxalabeni, kukho amathuba angenasiphelo.
Nangona ukakayi belisoloko lisetyenziselwa ukumela ukufa, akusoloko kunjalo. Iitattoos zokhakhayi kubafana zinokufuzisela imvukelo, amandla, inkanuko, ukuzalwa ngokutsha kunye nokufa.
Nangona iitattoo ze rose zinokubonakala zibubhinqa, iiroses zihlala zibandakanywa kuyilo oluninzi lwabafana. Nangona i-tattoo ebomvu yemveli yayiyeyona ixhaphakileyo, amagcisa anokuguqula i-rose yemveli ukuba ibe ngumsebenzi wobugcisa ngokwenza ukuba ibonakale iyinyani okanye i-3D.
I-rose ibonisa isiqalo esitsha, ukukhula, ukubakho, uxolo, kunye nokunika imbeko kwabo ubathandayo. Uninzi lwentsingiselo luxhomekeke kumbala we-rose kunye nobugcisa obuthile.
Iitoni ze-Owl zifanekisela ubukrelekrele, ubulumko kunye nolwazi. Uyilo lunokutsalwa ngokwenyani okanye nangaphezulu kwisitayile somdabu, kwaye banokongezwa nakweminye imifanekiso. Izikhova ezincinci zilungele izihlahla, amaqatha, kunye nezandla.
Kodwa ezinkulu zinokufumaneka emqolo, esifubeni, ethangeni, okanye kwingalo ephezulu. Ukuba ufuna umvambo owahlukileyo ongahambelaniyo, fumana Umvambo wesikhova .
I tattoo ye-phoenix imalunga nokuqala ngokutsha nokuzalwa kwakhona. Ngamanye amaxesha ukuqeshisa okutsha ebomini yeyona ndlela yokuqhubela phambili, yiyo loo nto abafana abaninzi befumana ii-phoenix tattoos. I-phoenix ephuma eluthuthwini ingabonisa inguqu, isidima, kunye namandla.
Kuqheleke ngokumangalisayo phakathi kokufumana iziyobisi kunye nabo bajongene nelahleko enkulu kodwa baqhubeke nokuqhubela phambili ebomini.
Inkqubo ye- umvambo wejoka sesinye isidalwa esinamandla kunye nembono yoyilo. Iidragons zimele amandla, amandla, ukubawa, ingqondo, ubulumko kunye nemvukelo. Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeedragons, kwaye nganye inentsingiselo yayo.
Iidragons ezineempondo zezona zinamandla, iidragons zasezulwini zingabakhuseli, kwaye iidragons zomhlaba zifana nookumkani nabalawuli. Iidattoos zeedragoli zenzela uyilo olumangalisayo, ngakumbi ololulwe njengetattoo yomkhono ogcweleyo okanye eyolula engalweni, egxalabeni, ngasemva nasesifubeni.
I tattoo yekhampasi ihlala ixabiswa, kodwa inikezela ngombono weklasikhi kumadoda afuna uyilo oluncinci, olulula olunentsingiselo enzulu. Ngokwesiko, ikhampasi luphawu lomhambi, kodwa abanye abafana bayathanda ukwandisa umelo kuhambo lobomi.
Ikhampasi ifanekisela ithamsanqa kunye nesikhokelo njengoko sihamba kwindlela yethu, isinceda ukuba siqonde phakathi kokulungileyo nokungalunganga ukuze sikwazi ukufikelela kulonwabo, impilo kunye nempumelelo.
Iitattoo ze-3D zimele uyilo lwethu esizithandayo kwaye zinokuthakazelisa ngokwenene. Ngabaculi ababalaseleyo kuphela abanokwenza iitatoo ezipholileyo ze3D.
Ezona zimvo zibalaseleyo ze-3D zetattoo zibandakanya ukuqaqanjelwa okubonakalayo, izixhobo zoomatshini okanye iirobhothi njengamalungu omzimba, amacandelo aqingqiweyo esikhumba kunye nokunye. Kubalulekile ukufumana umculi ohloniphekileyo wolu hlobo lwe tattoo, kodwa ngaphandle koko, ukuyila akunamkhawulo.
Iitattoo zesizwe zithatyathwa kwimbali yakudala kunye neenkcubeko. Njengophawu losapho, ukomelela, amandla, kunye nesibindi, uyilo lwesizwe lunesibindi kwaye luhle. Ngetattoo entsonkothileyo kunye nexesha, fumana iipateni zesizwe.
Iitattoo zeenkwenkwezi zihamba kwiminyaka yakutshanje. Inkwenkwezi inokuba ncinane kwaye ilula njengeinki emileyo, okanye enkulu kunye nesitayile sokubonakala kwendoda. Ekugqibeleni, itattoo yenkwenkwezi inokubonakala ilungile kuwo nawuphi na umntu.
Iitattoos zeengelosi zinokumela ukholo lwakho, ukukholelwa kwakho kwiingelosi, okanye ubuhle boboyilo. Ingcamango yakho yeta tattoo inokuba ntle kwaye ibe serene okanye i-badass kunye ne-edgy. Nokuba yeyiphi na, iingelosi zenza ubugcisa bomzimba obugqwesileyo.
Itattoo yomculo ngumbono ogqwesileyo kubafana abaziimvumi okanye abanoxabiso olunzulu ngomculo. Yabelana ngokuthanda kwakho umculo ngamanqaku obugcisa, izixhobo zomculo, amazwi omculo, okanye nawuphi na omnye ummeli.
Iitolo zetolo zikhangeleka zintle naphi na emzimbeni wakho. Ngapha koko, iintolo zetattoo tattoo zenza ezona tattoos zibalaseleyo kuba zilula kwaye zinesitayile. Iindawo ezidumileyo zibandakanya isihlahla kunye nengalo yangaphambili.
Iitattoo zeentsiba zityebile ngesimboli kwaye ziyaguquguquka ngokwaneleyo ukuba zilingane naphi na. Ngelixa ucinga ukuba uyilo lwe tattoo lweentsiba luthe nkqo, jonga indlela yokuyila yokuma.
I tattoo yesithsaba yamadoda yenzelwe ukubonisa ukuba ungukumkani. Iithsaba zihlala ziyinxalenye yokudibanisa iitattoos, apho isoka kunye nentombi okanye indoda kunye nomfazi bafumana inkosi kunye nokumkanikazi uyilo lwe tattoo ukubhiyozela ubudlelwane babo. Ngesi sizathu, ii-tattoos zesithsaba zinokuba ziimpawu ezinamandla kakhulu.
Iitattoo zosapho zibonakalisa uthando nomanyano. Ezinye zezona mvo zilungileyo zetattoo yosapho zibandakanya iikowuti ezinje ngoSapho lokuQala, uSapho luNaphakade, kunye noSapho ngaphezulu kwayo yonke into okanye amagama, iifoto, kunye nemithi yosapho.
I tattoo yosapho inentsingiselo kwaye ikhethekile, kwaye bambalwa abantu abaye bazisole ngolu hlobo lwe-inki.
I-scorpion tattoos zinokubhiyozela i-Scorpio horoscope okanye zimele uthando, isini, ukoyikisa, amandla, unyamezelo, ububi nokufa. Njengeqhekeza elinamandla lomsebenzi wobugcisa, khetha i-scorpion tattoo ngononophelo.
IiTatoo ezinentsingiselo ziza ngazo zonke iimilo, ubukhulu kunye nezitayile, konke kuxhomekeke kumyalezo ofuna ukuwudlulisa. Nokuba ukhetha ikowuti, uphawu, igama, okanye olunye uyilo olupholileyo oluthetha nomphefumlo wakho, abafana bahlala bekhangela iitatoo ezizodwa ezinentsingiselo.
Igama le tattoo linokuba yindlela eyoyikekayo yokubonisa uthando kwilungu losapho okanye kumhlobo osenyongweni. Nokuba ufuna ukubhiyozela uthando lwakho kwiqabane, umntakwenu, umntwana, utatomkhulu, okanye umhlobo osenyongweni, amagama eetatto konke malunga nokubhalwa koyilo.
Ngoku ukuba unezimvo ezahlukeneyo zetattoo xa kufikwa kwindawo emzimbeni wakho, lixesha lokuba ucinge malunga noyilo lokwenyani. Ngamanye amaxesha, unokubona isiqwenga somsebenzi owuthandayo ngaphandle kwesizathu, kwaye oku kwamkelekile nje njengomhla okanye into engumfuziselo. Apha, uya kufunda ezona ndlela zibalaseleyo zokwenza iitattoo ezaziwayo phakathi kwamadoda.
I tattoo yomkhono igubungela ingalo, kwaye inokuba yindawo enkulu yokuthwala imiyalezo emikhulu, enamandla kunye nemizobo. Ngelixa umkhono opheleleyo ugubungela ingalo iphela, kunye nomkhono onesiqingatha unokugubungela ingalo ephezulu okanye esezantsi. Uninzi lwabafana lusongela i-sleeve tattoo egxalabeni, ngasemva kunye nasesifubeni somsebenzi omnene we-badass.
Ngelixa iintlungu zisahluka, indawo ezikufutshane nethambo, ezinjengeengqiniba kunye nesihlahla, zinokuziva zithambile kunendawo ezinkulu ezinje ngengalo, umva wengalo kunye negxalaba.
Xa kuziwa ekukhetheni umzobo we tattoo epheleleyo okanye enesiqingatha emkhonweni, malunga nalo naluphi na uyilo onokucinga ngalo ukuba lunokuphila. Amanye amadoda akhetha umfanekiso omnye osonga macala onke okanye inxalenye yeengalo zawo.
Abanye bakhetha ukuguqula imikhono yabo ibe yimifanekiso ebonisa izinto abazithandayo, izinto abazenzileyo, okanye nezinto abazithandayo.
Ingalo kunye neetattoos iitattoo zahlukile kancinci ekubeni zingamaqhezu omnye obugcisa obungagubungeli ingalo yakho iphela njengomkhono. Ingalo yangaphambili yindawo entle yeetattoos, kwaye ubukhulu becala, nayiphi na intlungu onokuthi uyifumane incinci.
Ukuba ungumsebenzi osebenza eofisini, unokugubungela itattoo yengalo ngehempe ende, kodwa kulula kakhulu ukufihla inki engalweni yakho ephezulu.
Ukuba ufuna umvambo engalweni yakho, nantoni na iyahamba. Ingalo inokwamkela ezona tattoo zoyilo kunye nemibono.
Iitattoos zesifuba zikhula zithandwa kakhulu kunyaka ngamnye odlulayo kwaye zimele ezona ngcinga ze-masculine kunye ne-badass tattoo. Nangona kunjalo, i-tattoo yesifuba inokuthi okanye ingakulungeli.
Amadoda aneenwele ezincinci zomzimba kuya kufuneka achebe izifuba zawo ngaphambi kokufumana i-inki, kwaye anokufuna ukuqhubeka nokucheba ukugcina iitattoo zazo zibonakala.
Iintlungu zincinci kwinxalenye enkulu, kodwa iindawo ezijikeleze iingono kwaye zikufutshane nekhola zinokuba yingxaki. Ezona zixhobo zipholileyo zesifuba se tattoo zibandakanya inamba, ukhakhayi, i-phoenix, iikowuti, amagama abantu obathandayo, kunye nantoni na ofuna ukuyisondeza entliziyweni yakho.
Iitattoo zesifuba zezona zilula ukuzogquma kuseto lobungcali nolusesikweni. Nangona kunjalo, thatha ixesha lakho ukufumana umculi onetalente ukuze i-inki yakho iphume icocekile kwaye icace.
I tattoo yangasemva yeyona ndawo ifanelekileyo yemizobo emikhulu kunye nobugcisa. Umva yindawo engenanto yazo zonke iintlobo zeengcinga ze tattoo. Kwaye ngenxa yokuba unokufihla i-inki ngokulula, iitattoo zangasemva zinokuba mbi kwaye zoyikise njengoko ufuna.
Olunye uyilo oluthandayo lubandakanya iikowuti ezibhalwe umvambo ukusuka egxalabeni ukuya egxalabeni, imiboniso ebonakalayo yezidalwa zasentsomini kunye nezithixo, kunye nemifanekiso emincinci efana nomnqamlezo okanye igama.
Ngapha koko, enye yezona zimvo zilungileyo zetattoo ngasemva yikholaji onokuyongeza kuyo njengoko iminyaka ihamba; Amadoda amaninzi akhetha ukwenza iitattoo ezinyaweni zabantwana babo kunye nemihla yokuzalwa ngale ndlela okanye bafumane i-inki ukukhumbula iziganeko ezibalulekileyo ebomini babo.
Ukuba unenkxalabo malunga neentlungu, iindawo ezingaphezulu nje kwezona ndawo zibukhali zamagxa kunye nasemqolo zinokuba buhlungu ngokuphakathi, kodwa ziyanyamezeleka kuninzi.
Iitatto zamahlombe zilungele iziqwenga zobugcisa, kwaye amanye amadoda akhetha uyilo olufanayo kuwo omabini amagxa. Oku kunokujongeka kuhle ngetanki ngaphezulu, kodwa ngokulula kugutyungelwe yimpahla.
Uyakubona iitatoos ezininzi zamagxa esizwe njengoko zisolula ukusuka egxalabeni ukuya ngasemva nasesifubeni.
Igxalaba lelinye le iindawo ezibuhlungu ngakumbi ukwenza umvambo. Kodwa ukuba uya kwi-tattoo yendoda enobugorha kunye nesibindi, iintlungu ziphantse zafana nesiko lokuhamba.
IiTattoo zesandla iza ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokubanzi, uyilo lwezandla ziingxelo ezinesibindi kuba zibonakala kakhulu.
Ukupela igama okanye ibinzana kwisine (okanye isibhozo ukuba ukhetha ukwenza i tattoo ngezandla zozibini) kunokuhambelana nobuntu bakho. Abanye abantu bakhetha i-tattoo encinci kakhulu kwaye elula esandleni, njengesithsaba, ukuvuka, okanye ukunqumla.
I tattoo yomnwe kunye neminwe kunokuba buhlungu kakhulu, kodwa ngenxa yokuba incinci, uninzi lwamadoda alunakuphumelela. Icala elisezantsi lokunikwa ii-tatoos kukuba phantse akunakwenzeka ukuba uzigqume ukuba uyingcali.
Iitottoo ze-Neck zibonakala ngokugqithiseleyo kwaye akunakwenzeka ukuba zigubungele nazo, ngenxa yoko ngekhe sicebise le ndawo ukuba ungungcali ngomsebenzi. Ukuba oku akusebenzi kuwe, zininzi uyilo lwe tattoo entanyeni ezinokusebenza kakuhle apha.
Amagama angatshatanga aneentsingiselo ezithile athandwayo, njengamathambo amancinci asekhohlo okanye ekunene. Amanye amadoda anokukhetha ukuzenza umvambo entanyeni.
Ngokubhekisele kwintlungu, kuya kuxhomekeka kwindawo; umva wentamo awubuhlungu kakhulu kunamacala, kodwa nangona kunjalo, iintlungu ziphakathi kwaye ziyanyamezeleka ngokulula.
Ukuba uyayithanda imbono ye tattoo entanyeni, cinga ngononophelo malunga nento ofuna ukuyidlulisa kwihlabathi.
I tattoo yesandla ingabonakala imangalisa, kuxhomekeke kubuntu bakho kunye nohlobo lwe-inki oyifumanayo. Ngelixa kunokuba nzima ukugubungela itattoo yesihlahla, isihlahla sangaphakathi siye saba yinto eyaziwayo kumagcisa. Yindawo entle yoyilo olunesitayile, oluncinci, olunobuqhetseba olwamkelwa ngakumbi kwiindawo ezininzi zomsebenzi.
Ngelixa isihlahla singeyiyo indawo ebuhlungu yokwenza umvambo Ummandla ongaphezulu kwethambo unokuba nethenda ngokukhawuleza. Izimvo ezilula zijongeka zibalaseleyo apha, ke umnqamlezo, isithsaba, umhlakulo, iisimboli kunye nemihla kufanelekile ukuba ucinge ngako.
Iitattoo zomlenze zilungile kubafana abafuna ukubonisa i-inki yabo. Ithanga elingaphezulu kunye nethole zilungile kubasebenzi abasebenzayo abafuna ukufihla itattoo yomlenze, ngelixa imizobo kwiqatha lakho iya kwenza ingxelo.
Ngenxa yobude be-canvas, ezona mvo zintle ze tattoo zamadoda zihlala zinde njengenamba okanye i-phoenix. Nangona kunjalo, unokuhlala ufumana uyilo oluncinci kunye noludibeneyo.
I tattoo yesisu
I tattoo yesisu inokuba shushu kwaye ishushu ukuba unomzimba weetoni. Nokuba ufuna uyilo lwe-badass tattoo kwisisu sakho okanye kwicala elinye, khumbula ukuba umsebenzi wobugcisa ungakhangeleka wolule ukuba utyebile. Ngaphandle koko, yindawo enkulu enokufihlwa ngokulula.
Ngaphandle kwesithuba esilinganiselweyo, iitatoo zeminwe zinokulungiswa ngeendlela ezininzi. Ezona zimvo zintle zemvambo zihlala zincinci kwaye zilula, ezinomnqamlezo, ukuvuka, inqaku lomculo, uphawu, ileta okanye utolo. Abafana banokukhetha ukufumana uyilo olunye emnweni ngamnye wokuqokelela imizobo.
Iitattoo zembambo zinokuba phakathi kwezona zibuhlungu, kodwa intambo yeembambo yenza i-tovas ebalaseleyo. Iingcamango zoluhlu lwe tattoo ukusuka kwingonyama egqumayo egqumayo ukuya kulukakayi lomlilo oluvutha amalangatye.
Ngelixa unokubona ngaphezulu iitattoo zobuso ziyavela, olu hlobo lwe-inki lusaqwalaselwa njengembonakalo egqithileyo. Sincoma ukuba ulinganise i-pros and cons ngaphambi kokufumana enye, ngakumbi ukuba awuthandani noyilo.
Nangona kunjalo, maninzi amanye amalungu omzimba ukuze ufumane umvambo ekulula ukuwufihla kwikamva.
iimpawu ezintathu ezinkulu ze-zodiac
inkwenkwe eneenwele ezinde
uhlobo lweenwele ze-hawk
taper ngeenwele ezinde
iinwele zamadoda kubuso obungqukuva